Dandelion tea: Mara uru ya ma mụta otu esi ewere ya!
Gynecomastia: Kedu ihe ọ bụ? Kedu ihe kpatara ya? Esi na-emeso? Chọpụta ebe a!
sliming	 15 April 2018
Agha siri ike a lụrụ megide oke ibu ka bụrụ enyi dị ike: Saxenda, ọgwụ dị ike, nke nwere ike belata agụụ iri nri na nke a na-ekwe nkwa inwe ike belata ihe ruru 10% ngụkọta nke ndị na-ewere ya.
Agbanyeghị, ọ dị mkpa ịsị na ọgwụ a adịla ogologo oge, gụnyere ịmara nke ọma, ọkachasị mba ofesi. Ọ na-apụta na na Brazil, mkparịta ụka ahụ dị iche, na Saxenda abụghị ọgwụ a maara nke ọma.
Na nke a anaghị eme n'ihi na ọgwụ a nwere mmetụta ụfọdụ na - eme naanị maka ndị Brazil, mana n'ihi na iwu gbasara ọgwụ ịzụrụ ọgwụ dị oke nkenke, ya mere enwere nnukwu nsogbu na iwepụta ụdị ọgwụ a.
Ebee ka ịzụta Saxenda? Ego ole?
Naanị Saxenda bidoro rute n’ụlọ ahịa ọgwụ na Brazil na ọkara nke abụọ nke 2016, ọ ka nwere ike isiri anyị ike ịchọta, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị bi n’obere obodo, dịka ọmụmaatụ.
Tụkwasị na nke a, ọnụahịa ya nwere ike ịdị obere karịa, ọ bụ n'ihi na ọ bụ ọgwụ e si mba ọzọ ebubata, makana ọ ka batara obodo a.
Agbanyeghị, anyị mere nyocha ịntanetị wee hụ na a na-ere Saxenda na Drogaria Araújo na Drogaria Onofre. Pịa n'okpuru iji chọpụta ihe ọnụahịa ya bụ!
Nhọrọ: Mgbakwunye slimming mgbakwunye
Otu nsogbu kasịnụ maka ndị chọrọ idalata na Saxenda, bụ na ire ya na-ahapụ naanị yana ndenye ọgwụ, nke na-eme ka ịnweta ọgwụ ahụ sie ike.
Maka nke a, ọtụtụ n'ime ndị na - agụ akwụkwọ anyị na - achọ ka anyị jụọ ma ọ bụrụ na anyị nwere ngwaahịa ọ bụla iji gosi na ọ chọghị nhazi iji zụta, na nke a anyị na - achọkarị ikwu maka - AKWOKWỌ, nke bu ihe emere n’onu ozo ma nwekwaa ezigbo ihe!
Ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ azụworị ma na-ejikwa ifelata!
Quitoplan bụ ihe mgbakwunye sitere n'okike nke, na-emetụ ahụ aka, na-etolite gel na-adịgide adịgide, nke na-amịkọrọ abụba buru ibu n'ụzọ dị mfe, na-eme ka ewepụ ya na nsị, na-atụnye ụtụ n'usoro ọnwụ.
Ejiri ngwaahịa na ebumnuche nke ịkwụsị oke ibu na oke ibu, mana ngwa ngwa na n'ụzọ nkịtị, na-enweghị emerụ ahụ gị.
Pịa ebe a ka ị chọpụta ihe ọzọ banyere QUITOPLAN!
Ebee ka ịzụta ihe mgbakwunye a? Kedu ụgwọ?
A na-ere quitoplan naanị na ịntanetị, ị nwere ike ịzụta ya ugbu a. Nanị nweta ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke ngwaahịa ahụ, ma tinye iwu gị.
Ha na-ebuga na Brazil dum, a ga-akwụ ụgwọ ma ọ bụ site na kaadị kredit ma ọ bụ nyefee ụlọ akụ. Na kaadị ị nwere ike kewaa ọbụna!
Ọ bụrụ na ejighị gị ịzụ ahịa n'ịntanetị, ị nwere ike ijide n'aka na saịtị ahụ enweghị nchekwa zuru oke na enweghị aghụghọ, ok? Uru ọzọ bụ na Quitoplan na-enye gị ụbọchị 30 iji nwalee ngwaahịa ahụ, ya bụ, ọ bụrụ na ịzụta ma ị nweghị mmasị nsonaazụ ahụ, jụọ maka ego ahụ.
Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na ọ dị oke mkpa na ịzụta zụrụ naanị site na webụsaịtị gọọmentị, n'ihi na naanị websaịtị gọọmentị na-enye uru dị iche iche, dịka ịzụta zuru oke, ego na nkwalite, nkwa nnyefe, ụzọ ịkwụ ụgwọ dị mfe, na akụkụ kachasị mma, ngwaahịa mbụ.
Maka ọnụahịa ahụ, ọnụahịa ahụ dịgasị iche dịka ngwa ndị dịnụ. Nwere ike iji otu, atọ ma ọ bụ ise zụta ngwa iwu. Iji chọpụta uru, dị nnọọ nweta ukara website.
N'okpuru ebe anyị depụtara ụfọdụ uru nke ngwaahịa a. Lelee!
pụtara ibu ọnwụ
kpam kpam eke
Enweghị mmetụta ọ bụla
Sita Abụba na Afọ kpọrọ nkụ!
Na-agba ọsọ gị metabolism ma na-eme ka ị gbaa ọtụtụ calorie ume
Absorbs ma wepụ ihe abụba
Na-achịkwa eriri afọ
Na-ebelata Ọkwa Cholesterol
Na-enye gị ohere karịa!
Gịnị mere m ji zụta ngwaahịa a?
Na mgbakwunye na uru ị hụrụ n'elu, site na ịzụta ngwaahịa a, ị na-ewere akwụkwọ akụkọ dijitalụ n'ụlọ na ndụmọdụ, ntuziaka nzọụkwụ, ntụziaka, ọzụzụ na ọtụtụ ndị ọzọ.
Na mgbakwunye ịnweta ngwa ahụ na otu otu naanị ịza ajụjụ. Ekwela oge, tufuo ahụike gị na ahụ ike wee merie ahụ ịchọrọ mgbe niile.
Quitoplan enweela ihe ịga nke ọma, ị nweghị ike ịnwale ya, nri?
ihe kpatara Saxenda ji gawa wepụtara site ANVISA na Brazil na ọgwụ ndị ọzọ ọ bụghị?
Enwere ọdịiche dị oke mkpa n'etiti Saxenda na ọtụtụ ọgwụ ndị ọzọ eji mba ofesi maka ebumnuche ọnwụ: A naghị eji Saxenda ekwu okwu ọnụ.
Nke a nwere ike ịdị ka obere ihe, mana ọ pụtara ọtụtụ ihe.
Dị ka ọ bụ injectable, Saxenda anaghị arụ ọrụ n'ụzọ dị mfe, dịka ọtụtụ ọgwụ, site na igbochi agụụ. Ọgwụ ndị a a na-akpọ ndị na-ebelata agụụ nwere ike iweta nsogbu ahụike, ebe ọ bụ na mmadụ nwere ike iri naanị ị aụ ọgwụ ole na ole n'ụbọchị.
Kama, enwere ike inye Saxenda naanị site na injections, nke nwere oge a kara aka a ga-enye yana, ọ bụrụ na onye ahụ chọrọ ịkwalite nsonaazụ ha site na itinye ọgwụ ka ukwuu, nke a agaghị emetụta ka nri ha wee ghara ịkwụsị.
N'ihe ka ukwuu, ịdoụbiga mmanya ókè nke Saxenda nwere ike ibute isi ọwụwa, ọgbụgbọ, afọ ọsịsa na ihe ndị yiri ya, mana ọ nweghị n'ụzọ ga-ejedebe agụụ.
Na n'ihi na ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ dị iche, nke kama igbochi agụụ, n'ezie na-egbu oge igbu oge, ANVISA ghọtara na Saxenda anaghị eweta ihe egwu ahụike, yana iji ya emee nnukwu uru maka ndị na-echere nwere ndụ ka mma. ma felata n’ahụ́ ike.
Gụọkwa ederede banyere Desodalin!
You nwere mmetụta ọ bụla?
N'ụzọ dị mma, Saxenda nwere ike igosipụta na ojiji ya anaghị emerụ ahụ ike, na-enyekarị ndị mmadụ na-enweghị ike ibubata ibu ngwa ngwa iji mee ka usoro a dị ngwa.
Na nke a, ọkachasị ndị buru oke ibu na-enwe ike ịnagide ọnwụ n 'ụzọ udo karị, na-eme ka usoro nha ahụ dị arọ na ebumnuche iji meziwanye ahụike na igbochi ọrịa ndị oke ibu kpatara.
Kedu ka Saxenda si arụ ọrụ? Kedu maka ya?
Saxenda bụ ọgwụ enyere ikike n'aka ANVISA n'ihi na ọ na-arụ ọrụ ọfụma, na-eme ihe ozugbo na afọ, mana ọ bụ naanị mgbe mmadụ risịrị nri.
Kama iwepụ agụụ ka onye ahụ achọghị iri nri, Saxenda na-etinye onye ahụ, mgbe ọ risịrị nri, na usoro nhazi nke nwayọ nwayọ.
Site n'iji ya tụnyere, otu ihe ahụ na - eme dị ka eriri nri na - eme, mana n'ụzọ dị nwayọ nwayọ.
Na nkenke, mgbe mmadụ richara, nri na-ewe ogologo oge ka a gbarie, na-ahapụ mmetụta nke njupụta dị ogologo oge.
N'ụzọ dị otú a, onye ahụ na-aga nri ọzọ iji rie obere, na na, ruo mgbe arụpụtara ọgwụ ahụ kwere.
Na icheta: nsonaazụ nke Saxenda wepụtara bụ ọnwụ nke 10% nke ibu ahụ, mana nke a nwere ike bụrụ karịa, tumadi n'ihi nsonaazụ ya dịgasị iche site na mmadụ gaa na onye na ụdị mmemme, nri na ikike nke mmadụ iji felata.
Onye nwere ike iji Saxenda? Enwere mmegide?
Agbanyeghị na ANVISA wepụtara ya, a naghị atụ aro Saxenda maka onye ọ bụla chọrọ ifelata.
Na mkpokọta, egosiri Saxenda maka ndị mmadụ dịka ogo nke BMI (Body Mass Index) nke onye ahụ, naanị maka ndị nwere ọnụọgụ karịa 30%, ya bụ, maka ndị nwere oke ibu a na-akpọ oke ibu.
Mana dịka iwu ọ bụla nwere, ewepụtara Saxenda maka otu ndị ọzọ: ndị nwere ọrịa metụtara oke ibu, dị ka ọbara mgbali elu, ụdị ọrịa shuga abụọ abụọ, cholesterol dị elu na ihe ndị ọzọ. Maka okwu ndị a, BMI nwere ike ịdị obere karịa, ebe ọ bụ na oke ọnwụ anaghị emetụta oke ibu.
Ndụmọdụ ikpeazụ anyị nyere bụ na, agbanyeghị na ANVISA wepụtara Saxenda, nke a apụtaghị na ị ga-ahụ ya na ahịa ọgwụ ọ bụla.
Ọkacha mma, chọọ ngwaahịa a na ebe ịzụ ahịa n'ịntanetị, nke na-enye gị ohere ịnweta ọnụahịa dị ọnụ ala na oge nnyefe a pụrụ ịtụkwasị obi. Echefukwala ịma BMI gị tupu ịzụta Saxenda, ebe ọ dabara maka otu ndị ọrụ akọwapụtara nke ọma.
Etu esi etinye Saxenda?
Onye ọrịa nwere ike itinye Saxenda n'ọrụ, n'ihi na ọ dịghị mkpa ka etinyere ya intramuscularly, ngwa ahụ dị n'okpuru anụ ahụ, ya bụ, ngwa ahụ dị n'okpuru ụzọ.
A na-atụ aro ka a mee ngwa ahụ n'ime afọ, apata ụkwụ ma ọ bụ ogwe aka, otu ugboro n'ụbọchị, mgbe niile n'otu oge, nke onye ọrịa ga-ahọrọ.
Maka ama ndị ọzọ, gwa dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ere ọgwụ ọgwụ ka ị chọpụta ihe ngwa ahụ.
Chọrọ ịmatakwu? Lelee vidiyo n'okpuru!
60 echiche na “Saxenda: Ọgwụ ọjọọ nke ANVISA wepụtara!"
March 5, 2016 na 20:10 am - Dezie
Ebee ịzụta ya?
Ọgọst 24, 2016 na 17:44 am - Dezie
Pịa ebe a iji nweta ma chọta ọnụahịa ahụ: http://bit.ly/saxenda-comprar
March 8, 2016 na 23:21 am - Dezie
Ọ dị ezigbo mma. Enwere m nsogbu ibu, mana ọ dị nwute na agaghị m enwe ike ịzụta ya, enweghị m ike ịkwụ ụgwọ ya, ọ dịkwa oke elu
March 19, 2016 na 12:16 am - Dezie
Olee uru ọ bara? Ebee ka m ga-azụta?
Pịa ebe a iji mụtakwuo: http://bit.ly/saxenda-comprar
March 25, 2016 na 19:13 am - Dezie
Ọ ga-amasị m ịzụta ọgwụ a Saxenda n'ihi na m buru oke ibu ma achọrọ m ịma ụkpụrụ.
Eprel 13, 2016 na 14: 48 pm - Dezie
ebe ịzụta saxenda?
Eprel 13, 2016 na 21: 39 pm - Dezie
Ndewo Edna! A na-ere Saxenda na ụlọ ahịa ọgwụ.
Eprel 25, 2016 na 16: 11 pm - Dezie
Kedu uru saxenda bara? ebe m nwere ike ịzụta?
Eprel 25, 2016 na 17: 00 pm - Dezie
Kemgbe ole mgbe ndị buru oke ibu chọrọ ọgwụ ga-enyere ha aka ida naanị 10% nke ibu ahụ ha? Ndị buru oke ibu na-adịkarị ihe dịka 50% karịa ka ha kwesiri. Maka Chukwu ... tufuo kilogram 9 ma ọ bụrụ na onye ahụ dị afọ iri itoolu? Enwere m afọ iri abụọ na nri naanị ... ọ bụrụ na onye buru oke ibu na-a medicationụ ọgwụ, ọ bụ ihe dị mma na ọ bụghị naanị calorie ka ọ na-eri. Kedu ihe nzuzu.
Mee 25, 2016 na 12:55 pm - Dezie
Ebee ka m nwere ike iji atụnyere? You nọ n'ụlọ ahịa ọgwụ?
Mee 25, 2016 na 15:44 pm - Dezie
Ee! A na-ere Saxenda na ụlọ ahịa ọgwụ.
Julaị 21, 2016 na 14:25 am - Dezie
ahịa ọgwụ ọ bụla zutere saxenda?
Mee 30, 2016 na 13:25 pm - Dezie
You chọrọ nhazi iji nwee ike ịzụta?
Elisandra salino de Oliveira akpu
Julaị 1, 2016 na 19:31 am - Dezie
Achọtabeghị ya na ụlọ ahịa ọgwụ, dị ka ọkara nke abụọ nke afọ a
Ọgọst 24, 2016 na 17:43 am - Dezie
Ugbu a ọ dịlarị na ụlọ ahịa ọgwụ. Nke nta nke nta ọ na-abịarute na oge ọ ga-adị mfe ịchọta ya. Nke ahụ ziri ezi, dọkịta ga-ekenye ọgwụ ọ bụla!
Julaị 15, 2016 na 14:35 am - Dezie
Ndewo, ezi ehihie, achọrọ m ịma ebe m nwere ike ịzụta saxenda, ọ bụrụ na ị na-ebuga ya na ego ole, biko, ana m eche azịza
Ọgọst 4, 2016 na 01:25 am - Dezie
Ndewo, m ga-achọ ịma ma a na-ahụla saxenda na nke netwọkụ ahịa ọgwụ.
Ọgọst 24, 2016 na 17:40 am - Dezie
Ee, e reelarị ya! Pịa ebe a iji nweta: http://bit.ly/saxenda-comprar
Ọgọst 5, 2016 na 07:56 am - Dezie
Ndewo, m gbalịrị ịzụta ya n'ọtụtụ ụlọ ahịa ọgwụ Ma n'ezie ọ dịghị onye nụtụrụla ya, ị nwere ike ịgwa m otu na uru ọgwụ a bara, daalụ
Ọgọst 24, 2016 na 17:42 am - Dezie
Ọ bụ n'ihi na ọ bụ ọgwụ ka rutere Brazil. Pịa ebe a iji nweta ma chọta ọnụahịa ahụ: http://bit.ly/saxenda-comprar.
Ọgọst 10, 2016 na 13:46 am - Dezie
Ọ ga-amasị m ịmara mgbe a ga-ere ọgwụ a na Brazil…. Anvisa Libero onye ozo adighizi ekwu okwu !? Ebee ka m chọrọ ịzụtakwu? onwere onye ma ka esi azuta saxenda
Ọgọst 14, 2016 na 00:29 am - Dezie
Ka chifoo. ebee ka m nwere ike zụta saxenda na Brazil?
Ọgọst 14, 2016 na 00:30 am - Dezie
Achọrọ m n'ezie saxenda ...
Nwere ike ịchọta ọgwụ na ụlọ ahịa ọgwụ.
Ọgọst 22, 2016 na 15:38 am - Dezie
ebee ka ogwu saxenda, that anvisa kwuru otutu okwu !!!
Ọ na-abịa pharmacies ugbu a!
Ọgọst 24, 2016 na 14:08 am - Dezie
Ọ ga-amasị m ịmara na nke m ahịa ọgwụ m nwere ike ịhụ Saxenda, ihe bụ price?
Ndewo Eralza! Nwere ike ịlele uru Saxenda site na ịpị ebe a: http://bit.ly/saxenda-comprar
September 14, 2016 na 13:43 am - Dezie
mmadụ nwere ike ịmata uru ọgwụ ahụ bara
September 20, 2016 na 12:19 am - Dezie
M B BWO BU ya, Ọ na-efu R $ 750,00 NA 03 SYRINGES, MA YOU NA-EME LLỌ AKW LKWỌ AKW ANDKWỌ NA THELỌ KWES FR TO R $ 495,00.
September 24, 2016 na 15:05 am - Dezie
ebee ka ị debanyere aha, Milene?
September 28, 2016 na 20:14 am - Dezie
Ndewo millenarians, m ga-achọ ịma ma ọ bụrụ na ị felatalarị saxenda, m ga-azụta ya echi .ekele gị
Ọktọba 6, 2016 na 21: 53 pm - Dezie
EZI ỌMA, MILENA.
Ego ole ka ị kwụrụ maka mkpa ya? Ì CHET FLA NT DPF?
Ọktọba 21, 2016 na 09: 06 pm - Dezie
Na Rio de Janeiro, saxenda ahụ rutere n'ụlọ ahịa ọgwụ Venâncio na Septemba 27th wee debanye aha n'oge ịtụ ahịa na tebụl. E wepụla m 2kg n’ụbọchị m zụtara ya ruo taa. Ma na-emega ahụ. Amalitere m na obere ọgwụ nke ọkachamara na endocrinologist nyere m ka ahụ m mara m, n'ihi na na victosa m na-arịa ọrịa ma na-agbọ agbọ nke ukwuu ma aghaghị m ịkwụsị ya. Ana m arịa ọrịa shuga II. Saxenda, dịka m kwuru, mbido mbụ bụ 0.6. Ugbu a ọ gaferela 0.6 + 5 clicks. Ọgwụ ahụ na-enyere aka wepu nri binge. Ndị na-adịghị aghọta nsogbu a na-eche na ọ bụrụ na ha chọrọ nri na mmega ahụ, ọgwụ adịghị mkpa. Ọ bụ ee. Ọ na-apụta na e nwere ndị, kama ịgbanwe nri ọjọọ maka nke siri ike, iji nweta ọgwụgwọ nke ọgwụ ahụ, wee nwekwuo ibu ma chee na ọgwụ ahụ anaghị arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ọ gbochie mmanye ahụ, ka anyị jiri ohere a dị ịtụnanya wee gbanwee omume anyị wee nwee ezi ahụike na obi ụtọ! !!! Ya gaziere onye obula!
Ọktọba 31, 2016 na 00: 13 pm - Dezie
Na saịtị a ha etinyeghị ihe egwu dị egwu nke ịrịa ọrịa kansa thyroid !! Ọgwụ nke na-enye nsogbu karịa nsogbu !! Ọbụghị n'efu! Enwere m mmasị na ihe ọ na-enye n'ihe gbasara ọnwụ ọnwụ !! Ugbua oburu na igu akwukwo Nsogbu, I ghapu dika m kwenyere !! ????
November 23, 2016 na 17:26 am - Dezie
Ọgwụ a dị ezigbo mma m tufuo kilogram 3 masịrị m ya Márcia Uberlândia MG ị nwere ike ịchọta ya na Drogasil
November 25, 2016 na 12:35 am - Dezie
Anọwo m na-eji saxenda maka ọnwa abụọ, yana nkeji nke izu abụọ, metụtara lipiblock na m furu efu banyere 6kg. Mmetụta dị na ya: Naanị ntakịrị ọgbụgbọ, ma ọ dị mfe. N'ime ihe niile m weere, ma lee anya na ọ dị ole na ole, ọ bụ ihe kacha mma. Wezuga !!
November 26, 2016 na 14:52 am - Dezie
Amalitere m iji saxenda ụnyaahụ ma chọọ ikpochapụ obi abụọ, mbido mbụ bụ 0,6 More ruo ole? Izu ma ọ bụ otu ọnwa?
November 26, 2016 na 17:54 am - Dezie
Naanị dọkịta gị ga-enwe ike ikwu.
November 27, 2016 na 20:49 am - Dezie
Amalitere m ịta ya n’izu gara aga, adịkwaghị m otu n ’kilogram 01 na ọkara. Ọgwụ ahụ na-enye mmetụta nke afọ ojuju ma na-eme mgbaze ime nwayọ nwayọ. Bido ngwa ahụ na 0,6 mg n'izu mbụ, 1,2 mg na nke abụọ wee 1 mg na nke atọ. M na-anụ ụtọ ya, ọ dịkwa mkpa ijikọta mmega ahụ na ọgwụ, iji mee ka ọ dị arọ. Zụrụ naanị ndenye ọgwụ.
Disemba 1, 2016 na 23:43 am - Dezie
Helcio, ị na-agbaso ntuziaka ndị ahụ ma ọ bụ dọkịta gị gosipụtara na ị na-eme ka usoro ọgwụgwọ ahụ kwa izu?
Marilda nsọ Atọ n'Ime Otu
Disemba 22, 2016 na 11:33 am - Dezie
Helo! Echere m na gọọmentị kwesịrị inye onyinye n'ihi na ndị nwere oke oke ibu na-abụrịrị ajọ ọrịa dịka nsogbu akpa ume dịka ọmụmaatụ.
Disemba 27, 2016 na 15:48 am - Dezie
ndele ebee ka m azuru na ibi navilleville sc
Ọnye na -bụ André Gonçalves?
Jenụwarị 10, 2017 na 15:56 am - Dezie
Obi dị m ezigbo ụtọ, imc 28,5 m, m dị 1.81 n'ogo ma m na-atụle 93,5. N'ihi ibu ibu, enwere m steeposis hepatic, triglycerides na cholesterol dị elu, ana m agagharị agụmakwụkwọ na-agbaso ụkpụrụ nduzi nke onye na-edozi ahụ mana nri ahụ na-egbochi m ... mana uru ọgwụ a dị oke ọnụ ... ọ bụrụ ị na-echebara ụtụ isi, ọ ga-abụ akụnụba, kedụ ihe nwute !!! Gịnị mere na Brazil ihe niile siri ike?!
Febụwarị 7, 2017 na 13: 57 pm - Dezie
B VTA VICTOZA B B KAS ​​B K NOR NO ỌR NO Ọ B NEGH R Ọ B NER NE NA Ọ B NE Ọ B NEROU NA Ọ B PH ỌR PH ỌRAR ỌR IT Ọ B EF ỌMA.
Ọtụtụ ma mara.
Febụwarị 23, 2017 na 11: 54 pm - Dezie
Echere m na ọ dabere na organism.
My endocrinologist nwere mmasị na ọgwụ Liraglutide abụọ (Victoza na Saxenda), mana ọ na-edepụta Saxenda karịa n'ihi na ọ na-egosi nsonaazụ kacha mma na ndị ọrịa ya.
Febụwarị 8, 2017 na 23: 44 pm - Dezie
Ebe kachasị dị ọnụ ala bụ na ụlọ ahịa ọgwụ venancio, maka 490 reais.
Febụwarị 9, 2017 na 10: 24 pm - Dezie
Amalitere m ọgwụgwọ ahụ taa, ajụjụ bụ? Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe? Amalitere m 0.6, n'izu nke abụọ 1.2 na 1.8 ruo mgbe m laghachiri na dọkịta na 20/03 ka amaghị m ma m ga-azụtakwu. M na-eme njem na carnival ma amaghị m ma m nwere ike ịhụ ebe m na-aga.
Febụwarị 23, 2017 na 11: 53 pm - Dezie
Rita, lee akụkọ m anya ma hụ ma ọ na-enyere aka. Ihe ngwugwu ngwugwu na-ekwu ka ịbawanye ọgwụ kwa izu.
Amaghị m ihe okwu gị bụ, enwere m Hashimoto (ọrịa autoimmune thyroid) na ọ bụ ya mere na azụghị m ọgwụ ahụ n'onwe m. Ọ bụ m endocrinologist onye kenyere ya, Ọ gwara m ka m nọrọ izu 2 na nke ọ bụla onunu ogwu.
N'okwu m, ekwenyere m na igbe ahụ dum ga-ewe ọnwa 2-3.
Ogologo oge nke gị ga-adabere na ọganihu nke usoro ọgwụgwọ gị.
Olileanya na a na-enyere.
Eprel 17, 2017 na 14: 08 pm - Dezie
Ọ ga-amasị m ịmara kilogram ole furu efu kwa ọnwa
Mee 2, 2017 na 00:43 pm - Dezie
Achọpụla m kilogram 8! n'ime ụbọchị 40
June 22, 2017 na 09:22 pm - Dezie
Ụtụtụ ọma! Kedu onunu ogwu I na ewere? dọkịta m edepụtara izu 1 0,6, izu 2 1,2 na mgbe 1,8 gasịrị.
June 26, 2017 na 13:46 pm - Dezie
Ezi ehihie, Silvana gịnị bụ nri gị ????
Jenụwarị 6, 2018 na 18:43 am - Dezie
Amalitere m ọgwụgwọ ahụ ụnyaahụ wee gbọọ ajọ jọgburu onwe ya, n'ezie maka ndị nwere afọ na-esighi ike, ị nweghị ike ịga n'ihu na ọgwụ ahụ.
Jenụwarị 9, 2018 na 07:53 am - Dezie
Ogologo oge ole ka m ga-a medicationụ ọgwụ a?
Jenụwarị 15, 2018 na 21:15 am - Dezie
Karem, my endocrine kenyere saxenda + vonau flash ka ọ ghara ịrịa ọrịa ma ọ bụ ịgbọ agbọ… nwalee ya….
Jenụwarị 20, 2018 na 00:37 am - Dezie
Olee otú e si elekọta ya?
3 injections ka esi ewere?
Jenụwarị 22, 2018 na 11:14 am - Dezie
Ndewo, Lidia! Anyị na-atụ aro ka ị gaa hụ dọkịta gị maka ndụmọdụ gbasara otu esi ewere Saxenda.
Ọgọst 15, 2018 na 15:26 am - Dezie
M weere ya enyeghị ihe ọ bụla
Goji Plus: Nzuzo nke ndị ahụike!
Bichectomy: Ihe Banyere Surwa Ahụ nke Na-ebelata Ntị!
Ọdịiche dị n'etiti carbohydrates dị mfe ma dịkwa mgbagwoju anya: Anyị kọwara ya ebe a!